Fanokafana ny taom-pambolen-kazo :: Olona roa arivo sy iray alina mahery niara-dia tamin'ny Filohan’ny Repoblika • AoRaha
Nisokatra tamin’ny fomba ofisialy tao amin’ny kaominin’ i Firarazana, distrikan’Ankazobe, omaly, ny taom-pambo­len-kazo 2020. Manam-pahe­fana, olom-panjakana, olom-pirenena miisa roa arivo sy iray alina no tonga nifanotrona tamin’ny Filohan’ny Repoblika Rajoe­lina Andry, teny an-toerana.
Zanan-kazo miisa roa hetsy sy iray tapitrisa no novolena teto amin’ny faritra Analamanga, omaly. Velaran-tany 500ha mahery no novo­lena zana-kazo nifarimbonan’ ireo olona aman’alina ireo.
Nambaran’ny Filoha fa: “fanamby goavana napetrany ny fandrakofana ala an’i Madagasikara.” “Isaorako manokana ianareo. Miantoka ny fahavelomana sy miahy ny zava-boahary ny ala. Zary lasa Nosy mena i Madagasi­kara ka tsy maintsy ataontsika ny fameranana azy ho Nosy maitso”, hoy izy.
Nohamafisin’ny Filohan’ ny Repoblika fa zana-kazo miisa enimpolo tapitrisa no tsy maintsy voavoly amin’ity taona ity. Velaran-tany 40 000 ha no hambolena an’ireo.
Enimpolo taona ny nahazoantsika Fahaleovantena ary enimpolo tapitrisa kosa ireo hazo hovolena. Zava-dehibe izany satria sambany no nisy tetikasa lehibe momba ny tontolo iainana toy izao, mba ho fitsinjovana ny taranaka fara aman-dimby.
Hisy ny fampiasana fiaramanidina handatsaka an’ireo zana-kazo mifono tany any amin’ireo toerana saro-dalana. Velaran-tany 20ha isan’andro no ho voarakotr’ireto fiaramanidina kely ireto zana-kazo.
Fihotsahana teny Avaradoha :: Trano telo potika nianjeran’ny bararata
Fandaminana :: Velona ny fanoheran’ireo mpivarotra ny fampanarahan-dalàna eto Iarivo